निको भएका २७३१८०२
अपडेटः बुधबार, जेठ २१, २०७७ । १६:४९ बजे । स्रोत : coronavirus.jhu.edu/map.html र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
नारायण अधिकारी शनिबार, जेठ ११, २०७६, १३:००
काठमाडौं- प्रदेश ४ प्रमुख बाबुराम कुँवरकी पत्नी सीता प्रसाईं हरेक हप्ताजसो महानगरीय प्रहरी प्रहरी परिसर टेकु धाउँछिन्। उनी प्रहरीकोमा यसरी धाउनुको कारणे हो, चेक बाउन्स।
लाखौं रकम बराबरको चेक बाउन्स भएको भन्दै उनले महानगरीय प्रहरी परिसरमा चेक बाउन्सको उजुरी दर्ता गराएकी छिन्। यसरी उनी हरके हप्ताजसो चेक बाउन्स भयो भन्दै प्रहरीको गएर उजुरीको फलो गर्ने गरेकी छिन्। आफू पीडित भएको बताउँछिन्।
निर्जला विमली सेढाईं, रमेशलाल राजभण्डारीलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले आफूलाई ठगेको प्रसाईंको भनाइ छ। यसरी करोडभन्दा बढी ठगिएको भन्दै प्रसाईंले उजुरी दिएकी हुन्।
प्रसाईं ठगिएको भनिएको भित्री कुरा भने निकै रहस्यमय छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले ढुकुटी खेलाउने, मिटर ब्याजमा रकम लगानी गर्ने गर्छिन्। उनले कानुन विपरीत ढुकुटी र मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने गरेको सूचना पाए पनि प्रहरीले भिआइपी व्यक्ति भएकै कारण केही गर्न सकेको छैन।
ढुकुटी खेल्दा प्रसाईंबाटै लिएको चर्को ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै केही समय पहिला केही व्यक्ति प्रहरीकोमा पनि पुगेका थिए। प्रहरीले प्रमाण नपुगेको भन्दै प्रसाईंलाई कारबाही गरेन। अहिले पनि उनी हरेक हप्ता चेक बाउन्स भयो भन्दै प्रहरीकोमा धाउने गर्छिन्।
यसरी भिआइपी व्यक्तिको आडमा बसेर प्रसाईंजस्ता धेरै व्यक्तिले चेक बाउन्स गराउने र माटो रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ। व्यवहारिक रुपमा पीडित भनिएका नै ठग हुन्छन्। तर प्रमाणमा पीडित नै भएपछि प्रसाईजस्ता भिआइपी व्यक्तिले चेक बाउन्सको फाइदा उठाउँदै आएका काठमाडौं परिसरकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
चेक बाउन्सका अर्का भिआइपी पीडित हुन् पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहसँग नाता जोडिएका व्यक्ति अन्नपूर्ण राणा। राणा वीरन्द्रकी छोरी सु्रतीकी नन्द हुन्। उनी पनि लाखौं रुपैयाँको चेक बाउन्स भएको भन्दै प्रहरीको धाउने गर्छिन्। यी भिआइपी चेक बाउन्स पीडितका नमूना मात्र हुन्।
भिआइपी भएरै चेक बाउन्सको नाममा ठगी गर्ने पनि छन्। दोलखाका दिनेश कोइराला भिआइपीको नाम लिँदै ठगी गर्ने व्यक्ति हुन्। उनलाई चेक बाउन्स गरेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ समेत गरेको थियो। उनले आफू दोलखा कांग्रेसका पूर्वसभापति तारा कोइरालानिकट भन्दै ठगी गरेका थिए। उनी विरुद्ध १ करोड भन्दा बढी रकम ठगेको आरोप लागेको छ। पक्राउ परेका उनी धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।
उनले सर्वसाधारणदेखि भिआइपी व्यक्तिसम्मलाई ठगी गरेका छन्। पूर्वसेनापति प्याराजंग थापाका छोरा कवीरजंग थापा र प्रहरीका पूर्वअधिकृतलाई समेत उनले ठगी गरेको खुलेको थियो।
चेक बाउन्सको आरोप खेप्ने अर्का भिआइपी व्यक्ति हुन् ग्रेटर नेपालका संयोजक फणिन्द्र नेपाल। गौशालामा इडन गार्डेन स्कुल सञ्चालन गर्दै आएका नेपालले स्कुल भवनको भाडा भनेर दिएको ६ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स भएपछि घरबेटी नरेशकुमार न्यौपानेले प्रहरीमा उजुरी दिए।
उनको उजुरीको आधारमा नेपाललाई वैशाख १० गते प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। तर यो आरोप सत्य नभएको नेपालको दाबी छ। उनले भनेका छन्, ‘भाडाबापत ६ लाख दिएको तर पछि ६ लाख रुपैयाँ नगद नै दिएर चेक फिर्ता गर्न भनेको थिएँ। चेक आज बिर्सिएँ। भोलि ल्याउँछु भनेर पछि चेक बाउन्स गरेर उल्टै फसाइयो।’ उनी वैशाख २७ गते २ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्।
तर ६ लाख बाउन्स भयो भनेर उजुरी दिएका पीडितले भने रकम पाउन सकेका छैनन्।
त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो चेक बाउन्सको भिआइपी घटना मोडल खुस्बु ओलीसँग सम्बन्धित छ। सप्तरीका गोपाल कटुवालले २ वर्षअघि ३६ लाख रुपैयाँ खुस्बुलाई दिएका थिए। उक्त रकम तिर्न भन्दै ३६ लाखको चेक खुस्बुले गोपाललाई दिएकी थिइन्। पछि चेक बाउन्स भएपछि गोपालले खुस्बुविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा 'चेक अनादार'को मुद्दा दायर गरेका थिए।
सोही मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले खुस्बु ओलीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ। फैसला अनुसार मोडेल ओलीलाई ३ महिना कैद र ३ हजार जरिवाना सुनाइएको छ भने ३६ लाख चेक काटेदेखिको साँवा र ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको ठहर छ।
तर ओलीले चेक बाउन्सको उजुरीबारे अदालतले आफूलाई कुनै सूचना नै नदिएको दाबी गरेकी छन्। ‘मैले यसबारे कोर्टबाट एउटा लेटर पनि पाएको छैन। म्यादका लागि पनि बोलाएको जानकारी छैन’ उनले भनिन्, ‘बैंकसँग पहिले नै कटआउट भएर मैले पत्र पनि पाइसकेको छु।’ अदालत गएर बाँकी प्रक्रिया चाल्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिकाका मनोहर तिवारी र सुनसरीका अनिल विश्वकर्माजस्ता चेक बाउन्सका ठूलो रकम ठगी गर्ने विरुद्ध पनि पटकपटक प्रहरीमा उजुरी पर्दै आएको छ।
विश्वकर्माले ७ करोड रुपैयाँ र तिवारीले ४ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै केही समय अघि काठमाडौं प्रहरीमा उजुरी समेत परेको थियो। उनीहरु दुबै जनाले घरजग्गा कारोबार, मिटर ब्याजमा पैसा लगाउन भन्दै रकम उठाएर ठगी गर्ने र रकम फिर्ता गर्न भनेर दिएको चेक बाउन्स हुने गरेको थियो।
यसरी पछिल्लो समय करोडौं रुपैयाँ बराबरको चेक बाउन्स भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी पर्ने गरेको छ। यसबारे महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै पत्रकार सम्मेलन गरेरै चेक बाउन्सका नाममा हुने विकृति प्रहरीले रोक्ने बताएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए ‘चेक बाउन्सका अधिकांश घटनामा मिटर ब्याज, ढुकुटी, घरजग्गा कारोबार र ठगीसँग जोडिने गरेको पाइएको छ। यसबारे प्रहरीले सुक्ष्म निगरानी राखेर कारबाही गर्छ।’
यसरी चेक बाउन्सबाट पीडित हुने व्यक्ति सर्वसाधारण मात्रै छैनन्। यसबाट शिक्षित र भिआइपी भनिएका व्यक्ति नै पीडित बनेका उदाहरण धेरै छन्। त्यस्तै, ठगी गर्ने व्यक्ति पनि भिआइपी नै छन्।
प्रहरीले चेक बाउन्सको मुद्दा हेर्न थालेपछि अधिकांश कारोबार चेकमार्फत हुने र विश्वासका लागि भन्दै खाली चेकमा समेत हस्ताक्षर गरेर दिने, मिटर ब्याजीले चेकमार्फत् रकम लेनदेन गर्ने र त्यसको दुरुपयोग गर्दै चेक बाउन्स हुने घटना नौला होइनन्।
खेलकुदले जुराएको प्रेममा जात तगारो, कसरी मारिए नवराज?
लकडाउनका दुई महिना : प्रहरीलाई न सुरक्षा कवच, न जोखिम भत्ता
आलमको घरमा प्रदेश प्रहरीको छापा विवादित, प्रदेश २ का डिआइजीलाई स्पष्टीकरण
फास्ट ट्र्याकको परामर्शदाता छनौटमै रुमल्लियो सेना, सम्झौतापछि सार्वजनिक खरिदमा उजुरी काठमाडौंदेखि तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक (द्रुर्त मार्ग) निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेना परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामै दुई महिनादेखि... बिहीबार, जेठ १, २०७७
लकडाउनमा सेनाको खेल : फास्ट ट्र्याक परामर्शदाता छनोटको बदमासी लुकाउन सच्यायो पत्र नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई जोडने फास्ट ट्रयाक ( दुर्त मार्ग) निर्माणको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा भएको कमजोरी सच्चाउँदै बदमासी लु... शुक्रबार, चैत २१, २०७६
मेडिकल सामग्री खरिदमा के-के भयो बदमासी ! कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले व्यापारिक फर्म मार्फत चीनबाट किनेको मेडिकल सामाग्री खरिदमा भएको एकपछि अर्को बदमासी सा... बुधबार, चैत १९, २०७६
विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने कारमा कति छ कर? यस्तो छ फरक [सूचीसहित] बुधबार, जेठ २१, २०७७
स्वास्थकर्मीलाई कुटपिट गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन बुधबार, जेठ २१, २०७७
तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा पहिलोपटक भेटिए कोरोना संक्रमित बुधबार, जेठ २१, २०७७
काठमाडौंमा बुधबार कहाँ कहाँ भेटिए कोरोना संक्रमित? बुधबार, जेठ २१, २०७७
बुधबार कुन जिल्लामा कति भेटिए कोरोना संक्रमित? बुधबार, जेठ २१, २०७७
थप १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, नेपालमा संक्रमितको संख्या २१ सय १५ पुग्यो बुधबार, जेठ २१, २०७७